စည်းလုံးခြင်းရဲ့ အင်အား: ထိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဆမတ် အလိမ် မခံရစေနဲ့
ထိုင်း ၀န်ကြီးချုပ် ဆမတ် အလိမ် မခံရစေနဲ့
အမေရိကန် နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံရုံး ယာယီတာဝန်ခံနဲ့ တပ်မတော် ထောက်လှမ်းရေးမှူးချုပ်ရုံး လှမ်း(၁) မှာ စစ်ဦးစီးမှူး ဒုတိယတန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်က ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် ဆမတ် သိသာစေဖို့ ဆောင်းပါးကို အမေရိကန်နိုင်ငံ ၀ါရှင်တန်မှ ကျွန်တော့်ထံ ယနေ့ ထပ်မံပေးပို့လာပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးမှာ မြန်မာနိုင်ငံကို နျူကလီးယား ပိုင်ဆိုင်တဲ့ နိုင်ငံအဖြစ် နအဖက ကြိုးစားနေကြောင်း ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီများကို နအဖက လေ့လာသုံးသပ်ရာမှာ သက်ဆင်ရဲ့ပါတီကို သဘောကျပြီး ဒီမိုကရက်တစ် ပါတီကို မုန်းတီးတယ်လို့ သိရကြောင်း၊ ထိုင်းမြန်မာ နယ်စပ်မှာရှိတဲ့ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များကို Buffer Zone အဖြစ် နှစ်နိုင်ငံစလုံးက အသုံးပြုချင်တာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ နအဖ အနေနဲ့ ထိုင်းနိုင်ငံကို စစ်ဆင်မည်ဆိုပါက ချင်းမိုင်အထိ သိမ်းပိုက်နိုင်ရေး မြေကို ပိုင်မှ စစ်နိုင်မည် ဆိုတဲ့ စစ်သဘောတရားကို ကျင့်သုံးကာ လေကြောင်းကာကွယ်ရေးနဲ့ အမြောက်တပ်စခန်း များ အကြီးအကျယ် တိုးမြှင့်ချထားခဲ့ကြောင်း အကျယ်တ၀င့် ဖော်ပြထားပါတယ်။ ယခုလို ပေးပို့လာတဲ့ ဗိုလ်မှူးအောင်လင်းထွဋ်ကို ကျွန်တော် ကိုဖိုးတရုတ်က အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။
အချိန် 12:34 AM
အင်း ဗိုလ်အောင်လင်းထွတ်တစ်ယောက် ခုထိ သူ့ ကိုယ်သူ ဗိုလ်မူးလုပ်နေတုန်းပဲနော် ကောင်းရော
Do you think they will be cheated? They are smarter than you think. They also treat us like enemy since hundread years ago.
The best thing is to throwabomb or two into Thai Embassy in Myanmar. Not to kill people, just to send the message..
ကိုဖိုးတရုတ်ရှင့် သံဃာဝန်ဆောင်ဆရာတော်ဖြစ်တဲ့ မြင်းခြံဆရာတော်ဘုရားကြီးကို မှူးကြီးသန်းရွှေဟာ
၉၆/၉၇ တုန်းက ဘယ်လိုဆက်ဆံခဲ့တာလဲဆိုတာကို သိချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး ရှာဖွေတင်ပြစေချင်ပါတယ်။
Thai leaders are much cleverer than Myanmar leaders.Before second world war, Thailand escaped from beingacolony by balancing power between the two western countries, (It's neighbors, Myanmar and Vietnam were colonized by British and French respectively).
Today, Thailand has one of the strongest economy in ASIA and an important trade partner with CHINA; in the same time USA military troops are based on Thai soil for many years. This means Thailand do not have to worry about China's invasion like Myanmar does. MYANMAR GENERALS SHOULD LEARN FROM THAI LEADERS' WISDOM and STRATEGIES.